Amashumi amabini amawaka eeligi zikaJules Verne phantsi koLwandle
yokuqalisa >> Iincwadi >> Uphengululo kunye neNqaku >> Iilwimi ezingama-20.000 XNUMX zokuhamba ngaphantsi kwamanzi
Iilwimi ezingama-20.000 XNUMX zokuhamba ngaphantsi kwamanzi
Ndiyavuma, andizange ndifunde amaLigi angama-20.000 XNUMX phantsi koLwandle, yenye yezo ncwadi ezihlala zibambekile emgceni, enye yazo ilindile ngonaphakade, kunye nezinye ezininzi nguJules Verne. Kuyahlekisa kodwa xa ndandisemncinci zange bayithathela ingqalelo kwaye bajonge, ndiye ndafunda izinto ezingaqhelekanga. Kodwa xa ndabona i-ebook inikezelwa kwindlu yokushicilela yaseNordic, andizange ndicinge ngayo.
Ukukhetha uhlelo lwencwadi
Ke ngoku ndilapha ecaleni incwadi yam yencwadi eboniswe nguAgustín Comotto yaza yaguqulelwa nguÍñigo Jáuregui kwaye kwelinye icala incwadi ebonakalayo, evela kwingqokelela "Las Grandes Novelas de Aventuras" ngu-Ediciones Orbis ngo-1984 yaguqulelwa nguManuel Valvé.
Esi sigqibo sasibonakala sinzima, kodwa emva kokufunda nokuthelekisa iindinyana ezithile, inguqulelo kaIñigo Jáuregui yandenza ndaqiniseka ngakumbi. Ulwimi olusondele kakhulu, ngakumbi ngoku, ngelixa incwadi yam indala ifundwe njengesivakalisi sayo sokuqala
Unyaka we-1866 waphawulwa sisiganeko esingaqhelekanga
Kwaye kunokwenzeka ukuba uhlelo lwam lwakudala lungena ngakumbi kuguqulelo lomsebenzi, kodwa ndilonwabele kakhulu uhlelo lweNordic, ethi, ukuba uyafuna, yithenge nge-amazon.
Sisoloko sithetha ngombhali, kodwa hayi indlela ebaluleke ngayo into esiyinika abaguquleli xa iyinto ephambili.
Incwadi yingqungquthela yeziganeko kunye nobungqina. Ingakumbi kwinxalenye yokuqala apho inkangeleko yam njengenjineli kwaye njengesigebenga okanye umenzi njengoko beyibiza ngoku inika ukukhawulezisa kwe-adrenaline kwaye ayindivumeli ndiyeke ukufunda.
Nangona kuyinyani ukuba kwincasa yam isebenzisa kakubi udidi lwaselwandle emva kohlobo, ngamanye amaxesha kubonakala ngathi akukho siphelo kwaye sifunda uluhlu lweentlobo zebhayoloji yaselwandle. Kodwa singamxolela ngamaxesha anje
Ewe, yile sodium endiyikhuphile emanzini olwandle kwaye ndibhala ngayo izinto zam.
-Ewe. Ixutywe ne-mercury, zenza i-amalgam etshintsha i-zinc kwizinto ze-Bunzen. Imercury ayikaze ichithwe. Kusetyenziswa isodiyam kuphela kwaye ulwandle luyandinika. Ndiza kukuxelela ukuba iibhetri ze-sodium kufuneka zithathelwe ingqalelo njengezona zinamandla, kuba amandla abo e-electromotive aphindwe kabini kunawo amabhetri e-zinc.
Inxalenye yokuqala yenoveli, apho inxulumene khona yakhiwe njani iNautilus kwaye uthotho lobuchule obunayo, iyamangalisa. Kuya kufuneka sikhumbule ixesha apho kubhalwe khona kwaye UJules Verne wayengengonjineliKungenxa yoko le nto inkcazo yobuchwephesha imangalisa ngakumbi.
Uyabona, utshilo uKapteni Nemo, "Ndisebenzisa izinto zeBunzen hayi iRuhmkorff." Oku akunakulunga. Izinto zeBunzen zimbalwa ngenani, kodwa zomelele kwaye zinamandla, ekubaluleke kakhulu kumava ethu. Umbane owenziweyo ufakwa ngasemva, apho kusetyenziswa iigagnagnethi ezinkulu, zisebenza kwinkqubo ekhethekileyo yokuxhathisa kunye neegiya ezihambisa intshukumo kwi-propeller shaft. Oku, enobubanzi beemitha ezintandathu kunye nerediyasi yeemitha ezisixhenxe ezinesiqingatha, kunganika ukuya ku-XNUMX kumzuzwana.
UCaptain Nemo, uthatha yonke into oyifunayo ukuze uphile, ukusuka elwandle, ukusuka kumalaphu enziwe nge-algae ukuya kukutya kunye nemithombo yamandla. Ubulumko obungapheliyo.
Kodwa le ncwadi ibaluleke ngaphezu kwayo yonke incwadi enomdla. Iihambo ezingapheliyo.
Irhamncwa eloyikekayo laxhokonxwa phambi kwamehlo am, elifanele ukuvela kwiintsomi zetekisi.
Yayiyi-squid yobukhulu obukhulu, ilinganisa i-XNUMX yeemitha ubude, eyayihamba ibuya umva ngokukhawuleza okukhulu kwicala laseNautilus.
I-Kraken, iAtlantis, ubuncwane, iArctic, iindawo ezifihlakeleyo phakathi kwamazwekazi kunye neMaelstrom, zezinye zeemfihlakalo kunye nezinto ezothusayo ekufuneka ujongane nabasebenzi abangoyikiyo beNautilus. Okwangoku andicingi ukuba abonakalisi banokwenziwa kule ncwadi.
UCaptain Nemo ngumntu ongaqondakaliyo, ngokudlulileyo okumenze wakhanyela umhlaba kunye nabemi bawo ukuba babalekele kwaye baphile kuphela elwandle. Ngelishwa sishiywe ngaphandle kokufumanisa nantoni na eyadlulayo. Kube yinto ephazamisayo kum, ukuba kwenzeka into efanayo kuwe ungasifunda isiqithi esimangalisayo, apho kutyhilwa khona ukuba ngubani uNemo, wayakha njani inkwili yakhe kwaye bayathetha nangokufa kwakhe.
Ukuba ubusoloko ufuna okungakumbi, nantsi incwadi erhuqwayo yeNordica yamaqela angamashumi amabini amawaka eelwandle zohambo lwasemanzini lweComotto neJaúregui.
Ezi ntlobo zeencwadi zindenza ndizive ndingumntwana. Ukhe wamfunda uJules Verne? Ndicebisa ntoni?
Uhambo oluya kwiZiko loMhlaba.
Ehlabathini jikelele kwiintsuku ezingama-80.
Iiveki ezintlanu kwibhaluni.
Okanye omnye umntu ovela kumbhali? Ewe ndingathanda uhlelo olulungileyo kunye noguqulelo.
Khanyisa umlilo nguJack London
Indumiso yokuhamba kancinci kukaCarl Honoré
Ivenkile yeencwadi kaPenelope Fizgerald
Basilisk nguJon Bilbao
izigaba Iincwadi, Uphengululo kunye neNqaku Ukuhamba kwetikiti
Usizi kunye namanye amabali ngu-Anton Chekhov
Ukufundwa kwam ngo-2016
Amagqabantshintshi kwi "Amaligi ama-3, 20.000 phantsi koLwandle"
Juni 26, 2015 kwi-5: 47 pm
Ndinayo kwikamva lam. Inyani yile yokuba andikhumbuli ukuba ndiyifunde ndisemncinci. Ndicinga ukuba ndilibazisekile kwingcebiso ... ndiyithande kakhulu Uhambo oluya embindini woMhlaba.
Julayi 23, 2015 kwi-4: 26 pm
Molo, luvuyo olunjani ukukubona apha :)
Ewe hayi, inyani kukuba awulibazisanga, ndifunde kancinane ngeVerne, nayo ikwalindile, xa ndiyifunda ndiza kukuxelela ukuba kanjani :)
NgoSeptemba 7, 2017 kwi-6: 17 pm
Akunakwenzeka ukuba ungasifundi esi sihloko, nangona kumaxesha am eVernian endizithandayo "ibiyinqaba yeCarpathians" kunye "nesiqithi esingaqondakaliyo" kuqala kunesesibini.